Vaovao Mafana · Marsa, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Marsa, 2012
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Marsa, 2012
Espaina: Fitokonana Faobe Taorian'ny 100 Andro Niasan'ny Governemanta
Eoropa Andrefana 31 Marsa 2012
Taorian'ny fahatapahan'ny famatsiam-bola ho an'ny tolotra ara-tsosialy, ny fampianarana, ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny fahasalamana ary ny angovo azo havaoziana, ary indrindra ihany koa ny fikendrena ny mpiasa amin'ilay Fanavaozana ny Lalàna mifehy ny Asa vaovao, izay manamora ny fandroahana mpiasa sy mampihena ny zony ary manome tombony ho an'ny mpampiasa,...
Niraraka ny fanomezam-boninahitra tanaty aterineto taorian'ny fahalasananan'ilay mpitarika politika teo aloha tao Timor Atsinanana, fantatra amin'ny anarana hoe "Dadabe". Francisco "AVO" Xavier do Amaral, ilay nanambara ny fahaleovantena ny taona 1975, ary niverina tao amin'i Timor Atsinanana mba hiasa ao amin'ny Antenimiera mpanangana sy ny parlemanta. Efa kandidà intelo tamin'ny firotsahana ho Filoha izy.
Meksika: Lahatsarin'ny Horohorontany 7,8 Tsapa Tany Meksika
Amerika Latina 21 Marsa 2012
Ny 20 Marsa 2012, tratran'ny horohorontany ny morontsirak'i Acapulco any Meksika, izay notaterina fa teo anelanelan'ny 7,6 sy 7,8 amin'ny maridrefin'i Richter. Hatramin'izao dia tsy mbola nahenoana fa nisy ny aina nafoy. Indreto manaraka ireto ny lahatsary samihafa ahitana izay tsapan'ny any faritra samihafa ao amin'ny firenena nandritra ny hovitrovitra. Amin'ny teny espaniola avokoa ny feo.